Shirguddoonka Golaha Wakiladda Somaliland Oo Ka Garaabay Khaladaadka Ku Jira Xeerka Kufsiga |
Shirguddoonka Golaha Wakiladda Somaliland Oo Ka Garaabay Khaladaadka Ku Jira Xeerka Kufsiga
Shir-guddoonka Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa sheegay in culimada dalka loo xilsaaray faaf-reebka Xeerka muranka iyo doodda badan dhaliyey ee Kufsiga.
Qodobo ku jira Xeerkan, ayaa ka hor-imanaya Shareecada Islaamka iyo Dhaqanka wanaagsan “Xeerkani waa mid si cad uga hor-imanaya Diinta Islaamka, Dastuurka dalka iyo Dhaqanka” sidaa ayey ku doodayaan dad badan oo ka soo horjeeda Xeerkan.
Laakiinse Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Baashe Maxamed Faarax, ayaa shalay Warbaahinta u sheegay “Xeerka Kufsigu wuxuu maray Golaha Wakiillada, wuxuu u gudbay Golaha Guurtida, waxaanu gaadhay Madaxweynaha oo saxeexay, markaa xeerkaasi wuu dhaqan-galay”.
“laakiinse qodobo ku jira ayaa la yidhi waxay ka
hor-imanayaan Shareecada Islaamka, inagu waxaynu nahay dad Islaam ah, markaa culimada waxaanu ku heshiinay inay soo qoraan qodobada ka hor imanaya Shareecada ee ku jira” ayuu yidhi. Guddoomiyaha ayaa intaa raaciyey in dib u eegis lagu sameynayo qodobada xeerka ku jira, waxaana dib u naaqishaya Guddiyo farsamo oo ka kooban, Goleyaasha Baarlamanka, Culimo Aw diinka, Garyaqaanka guud ee Qaranka iyo Wasaarada Diinta iyo Aw Qaafta. “Wax allaale wixii Shareecada Islaamka ka hor imanaya ee ku jira xeerkaasi waa waxba kama jiraan” ayuu yidhi. Guddoomiye Baashe wuxuu sheegay inay sameynta shuruucda tallo iyo doorba ku yeellan doonaan culimada dalku, waxaanu qiray in la baal maray shaqo wakhti hore loo baahnaa in la sameeyo, taasoo ah in Khubarada shareecada Islaamka laga qaybgeliyo Sameynta Sharciyada sida kan Kufsiga oo kale Xaasaasiga ah. “Dalku wuxuu ku dhisan yahay wada-tashi” ayuu yidhi. Xubno kamida Culimada la kulantay shalay Shir-guddoonka Golaha Wakiillada oo la hadlay Warbaahinta, ayaa soo dhaweeyey go’aanka ay isla qaateen Guddoonka Baarlamanka. Golaha Wakiillada ayaa hore u ansixiyey Xeerkan, laakiinse gadaal markii uu soo baxay waxay kala kulmeen dhaleecayn badan oo uga timi Bulshada. Culimada laftooda ayaa wax laga saarayaa dhuumashada qodobada xaasaasiga ah ee ku jira Xeerkan. laakiinse Golaha Guurtida ayaa si weyn loogu amaanay diidmada iyo dareenka culus ee ay ka qaateen Sharcinimada Xeerkan, halka Golaha Wakillada, Xukuumadda iyo daneeyayaasha kale ee Xeerku cambaareyn badan kala kulmeen. Sidaas darteed, ayaa hadalka Guddoomiyaha Golaha Wakiilladu jeediyey looga dareemayaa in culayska kaga yimi Bulshada ee khuseeya diidmada Xeerkani shiiqisay aaminaadii lagu qabay Golaha Xeer-dejinta.